प्रकाशित मिति २८ पुष २०७५, शनिबार २१:३० लेखक नेपाली जनता
विदेशी डलर लिएर मधेसमा उग्रता देखाउने समूहलाई सहयोग गर्ने माननीयकाे ट्वीट अातंक !
काठमाडौं । गत पुस १२ गते एक अनलाइनमा म्यादी प्रहरीको आन्दोलनको कारणबारे…
काठमाडाैं । कालिमाटी तरकारी बजारमा सोमबार दिनभर तनाव भयो । व्यापारीले चरम कालोबजारी गरेको सूचना पाएपछि मिर्मिरेमै वाणिज्य आपूर्ति तथा…
यसरी समाप्त भयो पूर्णिमाको जीवन, मध्यरात ह्वाट्स एपमा आयो धम्की !
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एपमा कुराकानी हुँदै गर्दा प्रेमीले आपत्तिजनक फोटो भाइरल गरिदिने बताएपछि एक युवतीले आत्महत्या गरेकी…
विदेशका पैंसठ्ठी कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक
काठमाडाैं । सम्झौताअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने विभिन्न देशका ६५ रोजगारदाता कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागले रोक…
भारतमा आइएसको नयाँ शाखा !
भारत । आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ले भारतको जम्मू–कश्मीरमा आफ्नो नयाँ शाखा विस्तार गरेको दाबी गरेको छ ।…